राहतमा समेत विभेद ? – Dainik Lumbini
कोरोना संक्रमणपछि भएको लकडाउनमा सबैभन्दा बढी मार अति विपन्न नागरिकलाई परेको छ । उनीहरूलाई साँझ बिहानको छाक टार्न निकै कठिन भएको छ । दैनिक मजदूरी गरेर जीविका चलाउँदै आएकाहरूको घरमा चुलो बल्न गाह्रो भएको छ । किनकि लकडाउन भएको एक महिनाभन्दा बढी भयो । यो एक महिनामा जोहो गरिएको रासन पानी समेत सकिएको छ । यस्ता विपन्न नागरिकलाई अहिलेको महाविपत्तिमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । हुनेखानेहरूले सहयोग गर्नुपर्दछ । तर विडम्बना यस्तो बेलामा समेत राहत बाँड्दा राजनीति हुने गरेको छ । आफ्नालाई राहत दिने र अन्यलाई नदिई विभेद गरिएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । निस्कृष्ट र घृणित कार्यमा जनप्रतिनिधि लाग्नु लज्जाको विषय हो ।
स्थानीय सरकारहरूले राहत बाँडिरहेका छन् । प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा भने विपन्नले पाउनुपर्ने राहत राजनीतिक प्रभावमा पक्षपातिपूर्ण ढंगले बाँडेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यो बेला राजनीति गर्नेबेला होइन । विपन्नको जीवन बचाउने बेला हो । गरिबहरूलाई विना पक्षपात राहत दिनुपर्नेमा ‘आफ्ना’ भनिएकाहरूलार्ई मात्र राहत दिनु अपराध हो । जो–जे यो कार्यमा संलग्न छन् उनीहरू अपराधी हुन् । भोको पेटमा राजनीति गरेर वैमानहरूले पुण्य प्राप्त गर्ने छैनन् । यस्तो महाविपत्ति संधै आउँदैन । तसर्थ यो बेला समान ढंगले राहत वितरण गर्नुपर्नेमा जसले राहत वितरणका नाममा कु–कर्म गरेका छन्– उनीहरूलाई गरिबको आँसुले सधैं पोल्ने छ । भोको पेटमाथि राजनीति गरेर नरकको यात्रा तय गर्ने जनप्रतिनिधि जनताका निम्ति कलंक हुन् ।
जनता बाँचे न राजनीति गर्ने हो । देश रहे न जनताको प्रतिनिधि हुने हो । अहिलेको महासंकट सबैले मिलेर सामना नगरेसम्म पार लाग्दैन । कोरोना भाइरसले धनी र गरिब चिन्दैन । बालक र वृद्ध चिन्दैन । सामूहिक संकल्प, दृढ आत्मबल र होम क्वारेन्टाइनबाट नै यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ । होम क्वारेन्टाइनमा बस्न खाने कुरा चाहिन्छ । जब बाँच्नको लागि खाने कुरा हुँदैन, अनि को बस्छ घरमा ? भोको पेट घरमा कुजिएर कति दिन बस्न सकिन्छ ? हो यही बेला हो सरकार चाहिने । अभिभावक चाहिने । आफन्तजन र छरछिमेकी चाहिने । हुनेहरूले नहुनेहरूलाई सहयोग गर्ने बेला यही हो । कतै स्वर्ग छ भने स्वर्गजाने काम गर्ने बेला यही हो । सत्कर्म गर्ने बेला हो यो ।
मति बिग्रिएका जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल आफ्नो कु–कर्मको प्रायाश्चित गर । र, विना विभेद राहत वितरण गर । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जो–जो घृणित कार्यमा संलग्न छन् तिनको तत्काल छानविन गरेर जनताकाबीच सार्वजनिक गर । तर यो महाविपत्तिमा धेरैजसो जनप्रतिनिधिले भने धेरै राम्रो काम गरेका छन् । तिनलाई गरिब जनताले आर्शिवाद दिएका छन् । असल कर्म गरे राम्रो फल प्राप्त हुन्छ । जनाताको नजरबाट गिर्ने काम कसैले नगर ।
किन दिइएको छैन जोखिम भत्ता
अशोभनीय नाराबाजी र अभिव्यक्ति बन्द गर